Daredevil ရာသီ 2, Ep.12: ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပြန်လည်စုစည်းခြင်းရဲ့အဆုံးမှာအမှောင်ထု - Netflix မူရင်း
Daredevil ရာသီ 2, အပိုင်း 12: 'ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးမှာအမှောင်' Recap
Netflix မှအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၅၀ - My Beautiful Broken Brain သည်အဆင့်သတ်မှတ်သည် Daredevil ရာသီ 2, အပိုင်း 13: 'ငရဲရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာအေးသောနေ့' ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်း
ပြန်လည်ရယူခြင်း Daredevil ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၁၂ the ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးတွင်အမှောင်ထု
ရှေ့ဆက်လုယူသောသူ။ ယခုပြန်လှည့်ရန်နောက်ကျလွန်းသည်မဟုတ်။ သငျသညျဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျှင်သင်ဤဇာတ်လမ်းကနေ plotlines နှင့် Daredevil ရာသီ2မှယခင်ဖြစ်စဉ်များကိုသင်ကြည့်ရှုကြပြီမဟုတ်လျှင်မြင်ရပါလိမ့်မည်, ယခုပြန်သွားပါ။
Stick သည် Elektra လူငယ်တစ် ဦး အားလာမည့်စစ်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်မည့်သူရဲကောင်းတစ် ဦး အဖြစ်လမ်းညွှန်ပေးသည်။ သူမသည်သူမ၏အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းရှိသမျှကိုထုတ်လွှတ်ပေးရန်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူမ၏ပြောပြသည်။ သူမသည်သူမနီးပါးသူမ၏ sparring လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသတ်ခံရသည့်အခါကမှားမခံစားရဘူးသူ့ကိုပြောပြသည်။
Dareevil ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုမီ Elektra နှင့် Stick တို့သည်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်သတ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ သူကဘယ်သူ့ကိုမှမသတ်စေချင်ဘူး၊ Stick က Elektra ကိုဘာကြောင့်သေစေချင်တာလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့အဖြေမရခင်လက်က Stick ကိုဖမ်းယူခဲ့တယ်။
ဆက်စပ်ပုံပြင်:သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Netflix စီးရီးလိုအပ်သူကိုအံ့ Char ခြင်းဇာတ်ကောင် 10
Matt ကသူ့ကိုကယ်တင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Elektra ကသူ့ကိုပထမဆုံးရှာဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ဒါကြောင့်သူ့ကိုသတ်ပစ်နိုင်တယ်။ Matt ကသူမလမ်းကိုရောက်ရင်သူလည်းသူ့ကိုသတ်လိမ့်မယ်။ သူမခြိမ်းခြောက်ပြီးချက်ချင်းပင်သူမသည်သူမ၏ beau ကိုနမ်းရှုပ်ရန်စီစဉ်သည်။ သူမသည်စီးပွားရေးကိုဆိုလိုသည်။
ကရင်နှင့် Brett သင်္ဘောပေါက်ကွဲမှုကနေထပ်မံကျနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေမယ့်သူမဖရန့်ရဲတိုက်သေပြီယုံကြည်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမသိရသော်လည်းဘရက်သည်ယုံကြည်စိတ်ချသည်။
ကာရင်သည်သူသည်အပြစ်ပေးသူမဖြစ်မီ Frank Castle ရှိသူ၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးစဉ်ဗိုလ်မှူးကြီး Roy Schoonover နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အမှုအရာတောင်ဘက်အလှည့်ယူနှင့်အဟောင်းဗိုလ်မှူးကြီးသူမ၏အပေါ်တစ် ဦး သေနတ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်နှင့်ကားတစ်စီးပျက်ကျမှုရှိပါတယ်သည်အထိသူမနှင့်အတူချွတ်မောင်း။
Nelson နှင့် Murdock သည် Matt နှင့် Foggy နှစ် ဦး စလုံးသည်ရွေ့လျားရန်အချိန်ရောက်နေပြီဟုဝန်ခံသည့်အချိန်တွင်ဆိုင်ကိုပိတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ Foggy က Matt အားလက်ဖြင့်စွန့်ပစ်ထားသောရထားလမ်းဥမင်များကိုအသုံးပြုနေသည်ဟုတ်၊ မြို့။
Matt သည် Foggy ၏အကြံပေးချက်များကို အသုံးပြု၍ မြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများကိုတွေ့ရှိပြီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရသော Stick ကိုရှာဖွေရန်နီးကပ်စွာလုပ်ဆောင်နေစဉ်မြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများကိုတွေ့ရှိပြီးနောက် Ninja တစ်ခုမှတစ်ခုနောက်သို့ လိုက်၍ တိုက်ခိုက်သည်။
ဒီလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အရာက Stick ပုန်းနေတဲ့နေရာကိုရှာချင်ပေမဲ့ဝါးအညွန့်ကသူ့လက်ချောင်းတွေဖြတ်သွားသလိုတောင် Stick ကမချိုးဘူး။ Elektra မပိတ်ခင် Matt ကသူ့ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်၊ သို့သော် Nobu နှင့် The Hand တို့အားလုံးစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
သူမဇာတ်လမ်းအစတွင်သူမသေဆုံးလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သောသူမ၏ sparring partner ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူမငယ်ရွယ်သော Elektra အား Flashback ပြန်ခေါ်သည်။ သို့သော်သူမသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးသူ၏လည်ချောင်းကိုဖြတ်လိုက်သည်။ ဒါကသူမရဲ့ပထမဆုံးသေခြင်းလား? Star သည်၎င်းကိုမျက်မြင်သက်သေဖြစ်ကာသူအားဂရုစိုက်ရန်လိုသည်ဟု Stick အားပြောပြသော်လည်း Stick က Star ကိုသတ်ပြီး Elektra ကိုလွှတ်လိုက်သည်။
အချိန်ကိုတင်ပြရန်ရှေ့သို့ Flash လုပ်ပြီး Stick ပုန်းနေသည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ဒါဟာ Elektra ဖြစ်ခဲ့သည်။ Nobu က Elektra ကို Black Sky အကြောင်းပြောပြသည်။ ဒါဟာ Elektra ပါပဲ။ သူမသည် Black Sky ဖြစ်သည်။ သူမသည်လက်ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးလူနေမှုလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။
Matt ကလှည့်ကွက်တစ်ခုလို့သူမကိုပြောပေမယ့်သူမကယုံချင်တယ်။ သူမသည်ကအရာအားလုံးကရှင်းပြသည်ကပြောပါတယ်။ Stick ကအားလုံးသိတယ်။ လူတိုင်းက Elektra ကိုမုန်းတယ်။ Matt သည်သူမနှင့်ချစ်မြတ်နိုးရသူဖြစ်ရန်အသနားခံသည်။
Nobu ကသူမအစေကိုခံဖို့နေတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါကသူမရဲ့ကံကြမ္မာပါပဲ။
Matt သူသည်လက်၏ရန်သူဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့ကိုသတ်ရန်ပြောသော်လည်း Elektra ကမလုပ်နိုင်ပါ၊ Matt သည်လက်၏ကျန်ရှိနေသေးသောအဖွဲ့ဝင်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်နေစဉ်တွင် Stick သည်သူမနှစ်ယောက်လွတ်မြောက်နိုင်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
လေယာဉ်ပျက်ကျပြီးတဲ့နောက်ကရင်ကကားထဲကထွက်လာတယ်။ Schoonover သည်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှလွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်းဖရန့်ခ်သည်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲငင်နေသည်။ Schoonover ဟာပန်းပဲဆရာလား?!
တစ်ချက်တည်း။ တစ် ဦး တည်းသတ်။
ဖရန့်ခ်သည်သူ၏ CO ဟောင်းကိုသေစေပြီးစစ်တပ်အဆင့်တပ်ဆင်ထားသောရိုင်ဖယ်များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်သံချပ်ကာများ၏ဝှက်ထားသောစစ်သည်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Elektra သည် Stick ကိုကယ်သည်။ Matt သည် Stick မဟုတ်ဘဲ Elektra ကိုကယ်တင်ရန်ရောက်လာသည်ဟုဆိုသည်။ သူ Stick ကိုသတ်ခြင်းသည်သူမပြန်လာနိုင်သည့်အချက်မဟုတ်ကြောင်းသူသိသည်။ သူကအမြဲသူမအသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ်လကျခံဖို့မလိုချင်ကြောင်းသူမ၏အတွက်ကောင်းသောမြင်သောကွောငျ့သူမဘာပဲနေပါစေသူမကိုချစ်မယ့်ပါတယ်။
Stick နှင့် Elektra တို့ထွက်လာပြီး Daredevil သည် The Hand အဖွဲ့ဝင်များဝိုင်းရံထားသည့် Nobu သည် Daredevil သေရမည်ဟုပြောခဲ့သည်။
netflix အပေါ်ရာသီ7ပန်းခြံများနှင့်အပန်းဖြေ
Netflix အပေါ်အငယ်ရာသီ 1
မွေးမြူရေးခြံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု7ရှိရလိမ့်မည်
ဘယ်အချိန်မှာထောင်ချိုးရာသီ5netflix ပေါ်လာပါဘူး
dion ရာသီ2လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲပြုစုပျိုးထောင်